Mayelana NATHI - Zhejiang Tiantai Jierong New Material Co., Ltd.
Zhejiang Tiantai Jierong okusha Material Co., Ltd.
I-Zhejiang Tiantai Jierong New Material Co., Ltd. (phambilini eyi-Hangzhou Boao Textile Co., Ltd.) ibhizinisi elisezingeni eliphezulu eligxile ocwaningweni, entuthukweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwemishini yokuhlunga. Indlunkulu nefektri zitholakala eTaizhou Tiantai Industrial Park enhle. Ifektri yethu ithwala ngokujwayelekile isilinganiso sokudla se-SC. With kweminyaka engaphezu kweyishumi emisha kanye nentuthuko, yethu anezikhala, itiye isikhwama isihlungi, isihlungi non-ephothiwe isivele kwaba umholi e China itiye nendawo yekhofi. Imikhiqizo yethu ihambisana ne-American FDA, imithethonqubo ye-EU10 / 2011 kanye nomthetho Wokuthuthwa Kwendle eJapan.
Njengamanje, imikhiqizo yethu ithengiswa kahle eChina futhi ithunyelwa eYurophu, eMelika, eJapane njll. Ngokuthuthuka kolwazi, i-mesh yethu isetshenziswe kabanzi kumkhiqizo wesikhwama setiye, izinto zikagesi, ezokwelapha, ezokuphilisa nezinye izimboni. Ebhekene nethuba nenselelo yemakethe yamanje, uJierong uthatha ifilosofi yebhizinisi "yekhwalithi yokuqala, idumela kuqala, ikhasimende kuqala", ngokukhiqiza ukusebenza kahle okuphezulu, ikhono lokuphakelwa okuqinile, isiqinisekiso sekhwalithi enhle kakhulu kanye nensizakalo ephelele yokuthengisa ngemuva, futhi wakhe okuhlukile nomkhiqizo ohlukile -Jierong. Singaba umlingani wakho onokwethenjelwa, sethemba ngobuqotho ukubambisana nokwakha ubuhlakani ndawonye!
I-2021 Xiamen International Tea Industry (entwasahlobo) Expo (ngemuva kwalokhu ezobizwa nge- "2021 Xiamen (entwasahlobo) Tea Expo"), i-2021 Xiamen International Exi Industry Exhibition (ngemuva kwalokhu ebizwa ngokuthi yi "2021 Xiamen Tea Exhibition"), kanti i-2021 world tea Procurement Fair izobanjelwa eXiamen International Convention and Exhibition Centre kusuka ngoMeyi 6 kuya ku-10, nendawo yokubukisa engamamitha-skwele angama-63000, Kunamadokodo ajwayelekile angama-3000 omhlaba jikelele. Kubandakanya zonke izinhlobo zababonisi betiye, ababonisi bokupakisha itiye, ababonisi betiyi, ababonisi bezikhwama zetiye, njll.
Kulezi zinsuku, umnotho wasekhaya nakwamanye amazwe ubuye walulama ngale ntwasahlobo, kancane kancane wakha iphethini entsha yentuthuko ngokusakazwa kwasekhaya njengoba umzimba omkhulu nokusakazwa kabili kwasekhaya nakwamanye amazwe kukhuthazana, futhi ukusetshenziswa okuhlobene kwemboni yetiye nakho kuphindwe kabili ngokushesha. Umbukiso we-2021 Xiamen International Tea Industry (entwasahlobo) uzosebenzisa leli thuba elihle ukunikeza ukudlala okugcwele ezinzuzweni zemakethe kanye namandla okufunwa kwasekhaya, okuzokhuthaza kakhulu ukuthuthukiswa okunempilo kokuhweba kwetiye futhi kufake ukuzethemba namandla amakhulu ekuvuseleleni komnotho. wemboni yetiye.